ढुंगानाको उपचारका लागि नगद सहयोग जुट्दै – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
ढुंगानाको उपचारका लागि नगद सहयोग जुट्दै
२०७७, १६ आश्विन शुक्रबार २०:३०
धनकुटा १६ असोज । शल्यक्रिया गरेर थलिएका बोधनाथ ढुंगानाको उपचारमा सहयोगार्थ देश तथा विदेशबाट रकम संकलन हुदै गएको छ । ढाडको नसामा ट्युमर पलाएपछि सो ट्युमरको शल्यक्रिया गरेपछि उनी हिडडुल नै गर्न नसक्ने भई ओछ्यान मै थलिएका थिए ।
शल्यक्रिया पछि निजको खुट्टा नचलेपछि फिजोयोथेरापी गरेका थिए । तर, फिजियोथेरापी गर्दा पनि निको नभएको विरामीका दाई ऋषिराम ढुंगानाले बताए । ढुंगानाकाअनुसार उपचारका क्रममा छ लाख भन्दा बढी रकम खर्च भएको जानकारी दिए । आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका ढुंगानाको आर्थिक अभावका कारण थप उपचार गर्न समस्या रहेको परिवारस्रोतले जानकारी दिए ।
यसैक्रममा धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ३ कागते समाजको अगुवाईमा नेपाल, हङकङ र सिंगापुरका साथिभाईहरुबाट रकम संकलन गरिएको थियो । सो संकलित तीन लाख ५७ हजार आठ सय रुपैया नगद विरामी ढुंगानालाई प्रदान गरिएको छ । सो रकम अभियन्ता तथा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष विकास घिमिरेले हस्तान्तरण गरेका थिए । सो अवसरमा घिमिरेले शिर्घ स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचारको क्रममा रकम अभाव भए आगामी दिनमा पनि अभियान सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिए ।
धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका वडा नं. ४ कुरुलेतेनुपा स्थायी घर भएका ढुंगाना परिवार हाल धनकुटा नगरपालिका ७ मदनचोकमा बस्दै आएका छन् ।
संगठन विस्तार गर्दै धनकुटा कांग्रेस